Howlgal Miino baaris ah ayay Ciidamada Xooga Dalka kusoo qabteen 3 miino iyo ninkii Aasayay Gobolka Shabeelada Hoose. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Howlgal Miino baaris ah ayay Ciidamada Xooga Dalka kusoo qabteen 3 miino...
Howlgal Miino baaris ah ayay Ciidamada Xooga Dalka kusoo qabteen 3 miino iyo ninkii Aasayay Gobolka Shabeelada Hoose.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ay Howlgal ka sameeyeen degaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, Waxayna Howlgalkaasi la sheegay inay ka soo saareen miinooyin dhowr ah oo ay Aaseen Argagaxisada Al-Shabaab.
Howlgalkan ayay Ciidamada waxaa ay sigaar ah uga sameeyeen wadada xiriirisa degaanada buufoow bacaad iyo janaale oo hoostaga Degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Guutada 14-ka Oktoobar xoogga dalka ayaa howlgalka ku soo saaray ilaa Saddex miino iyo mid kamid ah raga miinada Aasayay, sida uu sheegay Sarkaal ka tirsan Ciidamada Guutada 14-ka Oktoobar ee howlgalkaasi Fulinayay.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Dowladda ay weli ka wadaan Gobolkaasi howlgallo Miina baaris ah, xilli dhowr jeer oo hore Ciidamada qaraxyo Miino lagula eegtay degaano ka tirsan Shabeellaha Hoose.
Previous articleXoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arimaha dibadda Soomaaliya oo qaabilay dhiggiisa Kenya.
Next articleJoe Biden oo la saadaalinayo in uu qaadayo Xayiraadaha dhinaca socdaalka ah ee saran dalal Muslim ah.